मोदीको हत्या षडयन्त्रः वास्तविक वा चर्चामा आउने खेल ? - विवेचना
मोदीको हत्या षडयन्त्रः वास्तविक वा चर्चामा आउने खेल ?
June 13, 2018 286 Views
काठमाडौं , जेठ ३० । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या गर्ने षडयन्त्रले यतिबेला निकै चर्चा पाइरहेको छ । तर त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण भने पर्याप्त छैन ।
एक हिंसाको आरोपमा केही व्यक्ति पक्राउ परेको र उनीहरुबाट बरामद पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नक्सलवादी -भारतीय माओवादी)ले मोदीको हत्या गर्ने योजना बनाएको भनेर दावी गरिएको छ ।
पत्रमा के लेखिएको छ ?
Previous Necessary Factors In Your Russian Bride In The Usa
Next वरिष्ठ कलाकार भीमबहादुर थापाको निधन
Pingback: เปลี่ยน ไฟแนนซ์ ได้ ไหม